UTIG NOTARO UDIDEKILE YINDLELA APHENDULE NGAYO KU-TWITTER KUYE 'UMLINGISWA WE-AF' WAMAJONI ABAFILEYO ':' NDANDINJANI, YINTONI LEYO? ' - INETFLIX
UTig Notaro uvele waqonda isangqa esitsha, enkosi kuye wangena Umkhosi wabafileyo. I-comic yamisa Umboniso wangokuhlwa weenkwenkwezi uJimmy Fallon ukuncokola ngomsebenzi wakhe ozayo kwifilimu kaZack Snyder, ehlasela iNetflix kwinyanga elandelayo, kwaye wavuma ukuba wothuswe yi-Twitter enxaniwe emva kokujonga kwakhe i-horny AF kwi-trailer, Vulture iingxelo .
Xa igosa Umkhosi wabafileyo Itreyila ilahle iveki yokugqibela, u-Fallon uchonge ukuba wonke umntu ebethetha ngayo yindlela abamthanda ngayo u-Tig Notaro, kwaye wacela i-comic ukuba ubomi bunjani ukuba yi-horny AF.
Owu nkosi yam, kuninzi okulungisiweyo, waphendula uJimmy, waphendula uNotaro, deadpan. Ngokwenene ibingamantongomane ajikeleze apha okoko bendihlala ndihambahamba ngokuba yi-horny AF. Andizange ndiyazi ukuba yintoni 'AF', ukuba uthembeke. Abahlobo bam bebendithumelela imifanekiso ye-Twitter. Baye bafana, 'Uhamba phambili ngokuba' yi-badass 'kunye ne-'Horny AF,' kwaye bendihlala ndinje, ngu lonto?
Emva kwexesha kudliwanondlebe xa u-Fallon acela malunga nendlu yakhe, u-Notaro waqhula, Ewe, iqabane lam likum ngoku ngoku ndi-horny AF. Ubeka indawo yokubasa umlilo ngaphantsi kwakhe ukuze ndihambe kwi-horny AF. Xa u-Fallon wakhankanya ukuba weva iimeko zokuqala ezi-4, u-Notaro wadubula kwakhona, Ekunene, nangona kunjalo iza kuza kwakhona, ndikholelwe.
Intwana yabo ifike apha emva kokuba iTwitter igxobhoze ngenxa yokuphoswa kukaNotaro, emncoma njengongenasiphako kunye nebadass etshisayo. Ngelixa umsebenzi wakhe ufumene ukuvunywa okungummangaliso Umkhosi wabafileyo abalandeli, wayengekho ngalo lonke ixesha ebekelwe ukubonakala kwifilimu ye-zombie. Ngo-Agasti ophelileyo, u-Notaro wathatyathwa watshintsha uChris D'Elia, owayetyholwa ngokuziphatha gwenxa ngokwesondo. Nangona Umkhosi wabafileyo Besele begqibile ukufota, baphinde benza i-reshoots ukuze bongeze uNotaro.
Kunye nefilimu ye-horny AF emva kokudityaniswa, Umkhosi wabafileyo Ukongeza iinkwenkwezi uDave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, kunye Samantha Win.
Umkhosi wabafileyo ii-premieres kwi-Netflix ngoMeyi 14. Bukela uNotaro Ngokuhlwa Show Udliwanondlebe kwividiyo engentla.
Izigaba: Tech-Iindaba Hulu Iindaba
Amantombazana asedolophini axabisa i-2020
mde kangakanani intambo
geoff eluhlaza angela eluhlaza
Ngaba imarike yemasheya ivulekile ngosuku lomsebenzi
Uneminyaka emingaphi uLuke korn
I-cornell ross net efanelekileyo
jay glazer fox imidlalo